Mudanaha degaanka Garissa Township oo xoola dhaqatada gobolka waqooyi bari ugu baaqay in nabad ay ku wada nooladaan – The Voice of Northeastern Kenya
Mudanaha degaanka Garissa Township oo xoola dhaqatada gobolka waqooyi bari ugu baaqay in nabad ay ku wada nooladaan
Star FM September 18, 2016
Hoggaamiyaha aqlabiyada baarlamaanka sido kalena ah mudanaha laga soo doortay degaanka Garissa Township Adan Bare Ducale aya xoola dhaqatada ku dhaqan waqooyi bari Kenya ugu baaqay in ay si nabad ah ku wada noolaadan.
Sido kale Adan Bare Ducale ayaa xusay in loo baahanyahay kulan nabadeed oo degdeg ah si loo xaliyo isku dhacyada u dhexeya xoola dhaqatada ku nool maamul goboleedyada isiolo iyo Garissa.
Ugu yaraan 7 qof ayaa in ka yar 3 todobaad gudahood lagu dilay dagaalo ka dhacay xadka ay wadagaan countiyada isiolo iyo Garissa.
Dagaaladan ayaa salka ku haya daaqa iyo biyaha.
Mr Duale ayaa dhanka kale ka dhawaajiyay in dowlada ay tageeri doonto gudoomiyaasha countiyadan si loo xakameyo amni daradan.
Hadalkan ayuu mudanaha jeediyay isaga oo madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto wakiil uga ahaa munasabad lacag loogu aruurinaayay dugsiga sare ee Sericho, 19 haween ah iyo 2 kooxood oo dhalinyarada ka soo jeeda waqooyiga degaanka Isiolo ay ku bahooben.
Ducale ayaa intaas ku daray in qudiisa uu madaxweyna dalka kala hadlaaya isku dhacyadan si xal degdeg ah loo helo.
Ugu dambeyntina Adan Bare Ducale ayaa ka dhawaajiyay in wasiirka arrimaha gudaha iyo isku duwida dowlada dhexe Joseph Nkaissery uu kulan la yeelanayo xildhibaanada laga soo doortay Isiolo, Garissa, Wajir, Marsabit, Tana River iyo Mandera si looga wada hadlo sidii loo soo afjari lahaa dhibaatadan.
← Nin 70 sano jir ah oo uu maroodi ku dilay countiga Machakos
Qowmiyada Maasai oo bilowday in ay soo xulato qofkii bedeli lahaa wasiirkii hore ee dhawaan geeriyoday William Ole Ntimama →